I-China EAS SYSTEM AM System Acrylic Ikhwalithi ephezulu ye-eas 58KHz Abakhiqizi Bezokuphepha Isango-PG300 abakhiqizi nabaphakeli | Etagtron
Isitolo Sezingubo Uhlelo Olwesabekayo lwe-EAS
•Ukuphepha-acrylic nensimbi kwenza izindunu zimelane ngokukhethekile, kunikeza "umuzwa ongabonakali", ukubukeka okuhle futhi okuphezulu kwemfashini kunoma yisiphi isitolo sangaphakathi noma sesimanje.
•I-Remote Alarm option izaziso zabasebenzi bemicimbi ye-alamu noma ikuphi esitolo
•Imbobo yokuxhuma insiza ivumela ukulawulwa kwesoftware okugcwele kunoma iyiphi i-antenna
•Isilawuli ngasinye singaxhuma kufinyelela kuma-antenna amane.
Uhlelo lwe-EAS AM-PG300
I-58 KHz (AM)
I-1500 * 306 * 20MM
I-0.6-2.2m (isuselwa kwithegi nokufakwa enviornment esizeni)
Imininingwane eyinhloko yezinzwa zezokuphepha esitolo:
Isebenzisa i-Mitsubishi eluhlaza impahla, ingagcina i-no-color fade, akukho deformation okungenani
2. 10years endaweni yasendlini.
3. Isisekelo sepuleti senziwe nge-high-density aluminium alloy ene-surface oxidation, iqine kakhulu futhi yinhle.
4. Isisekelo sekhava senziwe ngensimbi engagqwali engu-304, kepha hhayi insimbi engagqwali engama-204 okulula ukugqwala.
Ngokwezifiso Ilogo ikhava base
Enza ngendlela oyifisayo i-logo yakho ukuze ihehe ngokwengeziwe.
Ophakeme acrylic impahla, nenhle futhi esobala
Iqinile futhi ithembekile, ilwa nokungqubuzana futhi ayinamanzi
♦Ukumboza i-2.0m ngelebula le-DR ngama-antenna amabili.Isilawuli esisodwa singashayela kufika kuma-antenna amane. Ibanga lokutholwa elibanzi kakhulu kumodi ye-Quad (enezimpondo ezi-4) lingaba ngaphezu kuka-8M ngelebuli ye-DR.
♦Ithuthukisa ikhono lokulwa nokuphazamiseka kohlelo, futhi i-antenna ingakhiwa ngokukhululeka.Iyunithi eyodwa, amayunithi amabili, noma ngaphezulu ingasetshenziswa esitolo, futhi ibanga lokuthola liyakhuphuka njengoba inani landa lisebenzisa.
Langaphambilini EAS izingubo ezishibhile am anti-theft digital epaper tag tag AM DR label soft tag
Olandelayo: Isitolo se-EAS Retail 58khz AM Isitolo Sezingubo I-Alarm Anti-theft Aystem Gate-PT309
Isitolo se-EAS Retail 58khz AM Isitolo sezingubo i-Alarm A ...
EAS Antenna AM System Acrylic izinga okusezingeni eas ...
Uhlelo lwe-EAS Antenna Clothing Store Security ...
EAS Alarm Security AM 58khz EAS Anti ukwebiwa Syst ...